सूचना प्रविधि – Page3– Science Infotech
ईलामको ख्यातिप्राप्त कक्षा १० सम्म पढाई हुने स्कुल बिक्रीमा
स्कुलका सुविधाहरु र पूर्वाधारहरु यस प्रकार छन् :
१. ६ रोपनी जग्गामा भएको
२. कक्षा १० सम्म चलिरहेको
३. स्कुलको आफनै होस्टेल भएको
४. इलामको रमणीय ठाउँमा अवस्थित
थप जानकारीको लागि तलको मोवाईलमा सम्पर्क गर्नुहोला
मोवाईल नम्वर : ९८२४-९०९५१२
नयाँ उद्योग दर्ता तथा पेटेन्ट दर्ताको लागि उद्योग विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला
नयाँ उद्योग दर्ता तथा पेटेन्ट दर्ता थप जानकारीको लागि उद्योग विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला ।
फोनः +९७७ ०१ ४२६१२०३, ४२६१३०२, ४२६११६८, ४२६११६९
फाक्सः +९७७ ०१ ४२६१११२
Posted on January 8, 2017 September 25, 2017
Posted on December 10, 2016 September 25, 2017
मोबाइलमा ब्याट्रीको चार्ज नटिकेर हैरान हुनुहुन्छ अपनाउँनुस् यी उपायहरु ! मोबाइलमा धेरै समय ब्याट्री नटिकेर हैरानु हुनु भएकै होला ।धेरै जसो स्मार्टफोनको प्रयोगकर्ताहरु ब्याट्री नटिक्ने समस्याले गर्दा हैरानीमा हुन्छन । आजकल मोबाईलमा घडि, क्यामरा, रेडियो, एफएम, क्याल्कुलेटर लगायतका कामहरु हुन्छ । तपाईले चलाउनुभएको मोबाइलमा यी कुरा ध्यान दिनुभयो भने मोबाईलको ब्याट्री धेरै समयसम्म टिकाउन सकिन्छ ।
Posted on September 24, 2016 October 28, 2016
आइफोन अब २४ क्यारेट सुनको बन्ने
एजेन्सी, असोज ६। तपाईँलाई सुनको मोवाइल सेट बोक्ने इच्छा छ ? तर प्रशस्त पैसा तिर्नसक्ने उपभोक्ताका लागि यस्ता धातु जडित फोन बनाउन मोवाइल उत्पादक बाहेकका कम्पनीहरु तयार भएका छन् । २४ क्यारेट सुनको आइफोन भन्दा तपाईं अचम्म मान्नु पर्दैन । यो भर्खरै सार्वजनिक भएका नयाँ आइफोन ७ र ७ प्लस विश्वका धेरै जसो देशमा उपलब्ध भइसकेका छन्।
आइफोन इन्टरनेट तथा मल्टीमीडिया चलाउन मिल्ने एप्पल आइएनसीद्वारा बनाइएको तथा बजारमा ल्याइएको एउटा स्मार्टफोन हो । पहिलो आइफोन ९ जनवरी २००७ मा एप्पल आइएनसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्टिभ जब्सले सार्वजनिक गरेका थिए र यो २९ जुन २००७ मा बजारमा आएको थियो ।
सुन बहुमुल्य धातु हो र यसलाई सुखको गहना र दुःखको खजना भन्ने भनाई पनि हाम्रो समुदायमा प्रचलित छ । आइफोन आफैँमा एक प्रिमियम फोन हो तर यसलाई अझै प्रिमियम बनाउन सकिने भएको छ।
२४ क्यारेट सुनले आइफोन ७ लाई प्रिमियम बनाउँछ । भियतनामस्थित कारालक्स स्टुडियोले आइफोनलाई सुनको बनाउने भएको छ। आइफोनको गोल्ड प्लेटिङ प्रक्रियामा ६ देखि ८ घण्टा समय लाग्नेछ। यसमा लेजरको माध्यमबाट नाम, लोगो पनि राख्न सकिनेछ।